Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Haaland Oo Jawaab Siiyay Real Madrid, Ka Tagista Kylian Mbappe Ee PSG Iyo Qodobo Kale
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga: Haaland oo jawaab Siiyay Real Madrid, ka tagista Kylian Mbappe ee PSG iyo Qodobo kale
April 3, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Liverpool ayaa wajaheysa jahwareer ku aadan weeraryahanka reer Masar Mohamed Salah madama wararka qaar ay sheegayaan in 28 jirkaan inuu isha ku hayo mustaqbal kale. (ESPN)
Manchester United iyo Chelsea ayaa labaduba isha ku haya saxiixa ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Real Madrid ee reer Spain Lucas Vazquez, 29. (ABC)
Chelsea ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer Argentine Sergio Aguero, oo 32 jir ah, marka uu ka tago Manchester City xagaagan haddii aysan ku guuleysan karin tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka reer Norway Erling Haaland, oo 20 jir ah oo ka socda Borussia Dortmund. (ESPN)
Real Madrid ayaa diyaar u ah inay iska iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe Martin Odegaard si ay lacag ugu hesho saxiixa Haaland. Odegaard ayaa haatan amaah ugu ciyaara kooxda Arsenal waxana ay Gunners isha ku haysaa in ay heshiis joogto ah ka hesho 22 jirkan. (Times)
Laakiin Haaland ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay Real Madrid inuu doonayo inuu ku biiro kooxda xilli ciyaareedka soo socda. (DailyStar)
Barcelona ayaa u aragta weeraryahanka Inter iyo Argentina Lautaro Martinez, 23, inuu yahay dooq muhiim ah haddii u dhaqaaqista Haaland aysan miro dhal noqon. (Sports. es)
Paris St-Germain ayaa ka fiirsaneysa inay u ogolaato weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, 22, inuu ka tago xagaagan iyadoo wadahadalada qandaraaskiisa ay sii socdaan. (Le Parisien)
Barcelona ayaa soo afjari karta baacsiga ay ugu jirto ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, bedelkeedana waxay gacanta u galin doontaa 18 jirka reer Spain Ilaix Moriba door muhiim ah kooxda xilli ciyaareedka soo socda. (Metro)
Weeraryahanka reer Nigeria Kelechi Iheanacho oo 24 jir ah ayaa la filayaa inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Leicester xagaagan. (Dailymail)
Juventus ayaa dooneysa inay soo ceshato weeraryahanka reer Italy iyo kooxda Everton Moise Kean, kaasoo haatan amaah kula jooga Paris St-Germain. 21 jirkaan ayaa Toffees kaga soo biiray Juve 2019. (Tuttosport)
Tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa aaminsan in weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 27 jir ah, uu ku faraxsan yahay xaalada uu ku sugan yahay koox iyo wadanba iyadoo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan inuu xagaaga uu dhaqaaqayo. (Standard)
Inter ayaa dooneysa inay ceshato weeraryahanka reer Belgium Romelu Lukaku laakiin dalab 102 milyan euro ah ayaa ku qasbi doonta inay iska iibiyaan 27 jirkaan. (Corierre dello Sport)
Leicester City, Crystal Palace, AC Milan iyo Sevilla ayaa isha ku haya inay xagaaga u dhaqaaqaan saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara Marseille iyo xulka France Florian Thauvin, oo 28 jir ah (L’Equipe)
Tababaraha Southampton Ralph Hasenhuttl ayaa rajeynaya in kooxda ay heysato mashquul xagaaga suuqa kala iibsiga xagaaga wuxuuna aaminsan yahay in weeraryahan Danny Ings, 28, uu sii joogi doono. (Daily Echo)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee kooxda Chelsea iyo xulka England Joe Cole ayaa loolan ugu jira inuu noqdo tababaraha cusub ee xulka England ee 21 jirada hadii Aidy Boothroyd la ceyriyo. (Thesun)